Barefoot Royal Bhuruu Yevakadzi Rori Mateki - Hanukeii
Barefoot Royal Bhuruu
Iwo marori emota ekuunganidza Hanukeii® Izvo zvakagadzirwa neazvino, zvemahara uye zvine shungu vakadzi. Vanguard, kuwirirana uye rusununguko #BAREFOOTLIFE
Ikozvino dhizaini yeavant-garde vakadzi
Inogadziriswa yekuvhara kumashure ne "Snap-Back" system
60% machira / 40% polyester
5 Mapaneru ane visor yakakombama
ZVINOKOSHA: Usambogeza mumushini wekuwachisa, unofanira kugara uchivageza neruoko
Chimiro, runako, zvakasikwa, aesthetics, mazuva ano, avant-garde ... Vakadzi vezana ramakumi maviri nemakumi maviri vane simba uye vane chivimbo. Kuva mukadzi kwakafanana nekushinga. Kuva mukadzi akabudirira kwakafanana nekurwira kuburikidza nematete uye matete. Kuva mukadzi hakuna nani kana kushatisa pane kuve murume, chinongova chimwe chinhu chakasiyana icho zvakare chinoshamisa uye chakakosha. Iyo inozadzikisa zvakakwana kune kusimba kwechisiko: kuwirirana, kunzwisisika, kubata, ruzivo, kureruka uye kuomarara panguva imwe chete.
En Hanukeii isu takaenderana nezvinodiwa nemukadzi wanhasi. Isu tinogadzira zvigadzirwa zvevakadzi vemazuva ano vanoziva zvavanoda uye kuti vanozvida sei uyezve, tinozvipa hupenyu hwehupenyu uye kunakidzwa.
Kapu chinhu chinoshanda chekuzvidzivirira kubva kuzuva iro zvakare rinotsanangura maitiro ako nehunhu.
Parizvino vava chiratidzo chefashoni yazvino, nevashoma vanozivikanwa kubva munyika yemafashoni nemitambo, vasina kuoneka ne mesh cap munzvimbo dzese dzese muzhizha nemuchando.
Rudzi rwekuvhara mhando Snapback kukwana chero saizi yemusoro. Chinyakare chakafemerwa nemakumi masere nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe.Makombi edu emarori akaumbwa nemuromo wakakombama. Ivo vakakwana kuti vaperekedze iwe pane ako mafambiro akatenderera nyika yepasi kana muhupenyu hwako hwehupenyu.
Dzimwe nguva dhizaini yakapusa, asi inooneka inokwezva uye iine zvinhu zvinodiwa, inokatyamadza kupfuura iyo yakatakurwa neruvara kana zvishongo. Izvo zviri nyore kwazvo kubatanidza yakangwara uye yakapusa chishongedzo mukutarisa kwakatakurwa pane kuzviita neimwe nzira yakatenderedza.
Ndicho chikonzero mu Hanukeii Isu takasarudza kugadzira muunganidzwa wemabaseball caps ayo, pamusoro pekuzadzikisa basa rekudzivirira maranzi anokuvadza ezuva, akagadzirwa kuitira kuti iwe ugone kuasanganisa neakajairwa kana chipfeko chemudhorobha, beachwear uye kunyangwe neyaunoshandisa. zvemitambo.
Iyo kapu yakagadzirirwa nevashandi vefashoni vakasarudza kudzora zvinovhiringidza zvinhu uye kutarisisa kusimudzira zita Hanukeii. Kuti vape simba rakawanda, vakawedzera, nezwi rakafanana neiro rezuva kana kunyura kwezuva, mimwe mitsara ino ganhurana neiyo logo yechiratidzo. Iyi dhizaini iri muchimiro chechigamba kumberi kwekepisi, iine toni yegrey kunge kumashure iyo inodhonzera yakachena.
Icho chinhu chinosimudzirwa mumakanda edu izita rechiratidzo chedu: Hanukeii. Izita iro, muchokwadi, rakamirira zvimwe zvakawanda: Hanukeii ipfungwa, kwete izwi chete.
Hanukeii Yakazvarwa kubva pane yakapusa uye anodyne pfungwa yakabuda mudunhu reSouthern California parwendo rwatakaita nechikwata chese chevagadziri nevatauriri veiyo brand. Isu taida kuziva kuti chii chaive chakavanzika pakati pemigwagwa, mahombekombe nekutaridzika kwevanhu.
Mushure memwedzi yakati wandei tichishanyira Laguna Beach, Hyde Street muCalifornia, iyo South Of Market muSan Francisco uye tichitarisa, zuva nezuva, zuva ranyura pamusoro pePacific, takafunga kuti chero chatingaite nezvatichaunganidzira mune ramangwana, vanofanirwa kuve neicho chinhu kuti isu tanga tichinyatso simudza: runyararo, kunhuwirira kwegungwa, runako uye maitiro.
NEI TRUCKER CAPS?
Pamusoro pekuda dhizaini yema baseball makepisi, isu takafemerwa zvikuru nenhoroondo yechishongedzo ichi. Chinhu chakareruka sechishongedzo chaipfekwa nevatambi ve baseball kuchengetedza misoro yavo kubva kuzuva uye kutonhora, yasvika kumazuva edu seyemhando yepamusoro yemafashoni, isina nguva, isina murume kana zera, uye izvo hazvina kuzombopera.
Mafashoni akagadzirwa seizvi, angangoita pasina chinangwa, angangoita netsaona, uye nzira yakateverwa neiyi hunhu inotikurudzira kuti tirambe tichigadzira nekufunga nzira nyowani dzekuzadzisa zvido zvevatengi vedu, nekuti ndiani anoziva izvo ramangwana rakachengeterwa zvedu.
Barefoot Nhema 40.00 €
Barefoot Brown / Bhuruu
Barefoot Brown / Bhuruu 40.00 €
Barefoot Grey / Dema
Barefoot Grey / Dema 40.00 €
Barefoot Grey / Muchena / Bhuruu
Barefoot Grey / Muchena / Bhuruu 40.00 €
Barefoot Pink / Bhuruu
Barefoot Pink / Bhuruu 40.00 €
Barefoot Tsvuku / Grey
Barefoot Tsvuku / Grey 40.00 €
Barefoot Turquoise Bhuruu
Barefoot Turquoise Bhuruu 40.00 €
Barefoot Chena / Bhuru / Grey
Barefoot Chena / Bhuru / Grey 40.00 €
Barefoot Chena / Pepuru
Barefoot Chena / Pepuru 40.00 €
Deer Brown / Bhuruu
Deer Brown / Bhuruu 40.00 €
Deer Tsvuku / Grey
Deer Tsvuku / Grey 40.00 €
Deer Chena / Bhurauni / Grey
Deer Chena / Bhurauni / Grey 40.00 €